ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 7
> ၉၀ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နောက်ဆက် ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေ ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ ဦးဝင်းတင်နဲ့မေးခွန်းများ။မိုးမခ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၁ ဒီတပတ်မှာဆရာဦးဝင်းတင်ရဲ့ သဘောထားကို မေးမြန်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကတော့ ၉၀ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများက ပေါ်ထွန်းလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ဆက်လက်ရပ်တည်မှုကို မေးမြန်းဖြစ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။...
Interview with U Win Tin – We need to carry on political activities
> နိုင်ငံရေးပုံသဏ္ဍန်တွေဆက်လက်ထုတ်ဖော်တည်ဆောက်ကြရမယ် ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ၊မိုးမခ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၁ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်နေ့စွဲနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်တဲ့ ဥပဒေထွက်လာတယ်။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာရေးဆိုတဲ့စကားရပ်ကို ပြောင်းလဲသုံးစွဲတယ်။ အနည်းဆုံးကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနည်းဆုံး ၃...
Interview With u Win Tin – Freedom for Political Prisoners, everyone’s desire
> နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအရေးမြန်မာမိသားစုတွေရဲ့ အရေး ဦးဝင်းတင်နဲ့မေးခွန်းများ၊ မိုးမခ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၁ လာမယ့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ အင်န်အယ်ဒီပါတီက လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပါတီထပ်မံ မှတ်ပုံတင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် ဆွေးနွေးကြမယ်လို့သတင်းတွေ ကြားနေရပါတယ်။ အဲသည်အချိန်ကာလအတွင်းမှာ မိုးမခက ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့...
U Win Tin – NLD to be or not to be, tisaquestion
> မှတ်ပုံတင်မလား၊ မတင်လား … ကောလဟာလ ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၁ လက်ရှိအခြေအနေမှာ မြန်မာပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁ဝ ခုနှစ်မတ်လ ၈...
Interview with U Win Tin – Reestablish Political Ground Up in Burma
> နိုင်ငံရေးဘ၀တွေပြန်လည်ထူထောင်ကြဖို့ အချိန်ရောက်ပြီ ဦးဝင်းတင်နဲ့မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ၁၉ ၊ ၂၀၁၁ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်တာကိုအများပြည်သူက အများကြီး မျှော်လင့်သလောက် ဖြစ်မလားဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ ဟုတ်တယ်။ ကမ္ဘာကလည်းမျှော်လင့်တယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေကလည်း မျှော်လင့်တယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုတွေကလည်း မျှော်လင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာ...
Interview with U Win Tin – People rights to express
> ပြည်သူလူထုမှာပြောရေးဆိုခွင့် မရှိရဘူးလား ဦးဝင်းတင်နဲ့မေးခွန်းများ၊ မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ ၄၊ ၂၀၁၁ စနေနေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးမြန်းခန်းမှာ ဆက်လက်မေးမြန်းခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ကောင်းမွန် အကျိူးရှိတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေတွေ ရှိနေတယ်၊ပေါ်ထွန်းနေတယ် ဆိုတဲ့ အချိန်အခါမှာ...
U Win Tin Interview – Overseas Burmese go home first before Political Prisoners ?
> နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအိမ်ပြန်မရောက်ခင် ပြည်ပကလူတွေ အရင်ပြန်ကြမှတဲ့လား ဦးဝင်းတင်နဲ့မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ စက်တင်ဘာ၁၃၊ ၂၀၁၁ လွန်ခဲ့တဲ့ စနေနေ့ကဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ စကားပြောခဲ့စဉ်မှာ မေးမြန်းခဲ့တဲ့မေးခွန်းအစိတ်အပိုင်းတခုကတော့ ပြည်ပက မြန်မာတွေ လုံခြုံ အေးချမ်း စိတ်ချစွာအိမ်ပြန်လာခွင့် ရှိပြီလား၊ မိသားစုတွေ၊...
U WIn Tin – Mindset of Dictator need to be given up
> အာဏာရှင်စိတ်ဓာတ်တွေအလွှာတိုင်းက စွန့်လွှတ်ဖို့ လိုတယ် ဦးဝင်းတင်နဲ့မေးခွန်းများ မိုးမခ၊စက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၁ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကမြန်မာကြံ့ဖွံ့အစုိုးရက လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်တရပ်ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်။မြန်မာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအာမခံချက်တွေ ရှိကြောင်းပြသနိုင်ဖို့၊ မြန်မာပြည်အထွေထွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ အကောင်းဖက်ကိုဦးတည်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ...
> ကျနော်တို့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာ စောင့်နေရမှာလဲ ဦးဝင်းတင်နဲ့မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ စက်တင်ဘာ၎၊ ၂၀၁၁ ယခင်အပတ်က ဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့ အင်တာဗျူးအပြီးမှာအစုိုးရသစ်ရဲ့ လွှတ်တော်တွင်း အဆိုတင်သွင်းမှုများ၊ လှုပ်ရှားမှုများဆက်လက်ရှုစားကြရပါတယ်။ သွေးလှူဖို့ စည်းရုံးသူ ကိုနေမျိူးဇင်ကို အစုိုးရသစ်ကထောင် ၁၀...
Interview With U Win Tin – Common Ground & Goal for NLD & USDP Regme
> အင်န်အယ်ဒီနဲ့ လက်ရှိအစိုးရ အတူတူရပ်စရာ ဘာတွေရှိလို့လဲ ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ သြဂုတ် ၂၆၊ ၂၀၁၁ ယမန်နေ့က ဦးဝင်းတင်နဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်မှာ မေးမြန်းဖြစ်တာကတော့ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ပြန်လာတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့...
> ဦးကြည်မောင်အမှတ်တရများ ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မုိုးမခ၊ သြဂုတ် ၂၁၊ ၂၀၁၁ ဆရာဦးကြည်မောင်ကွယ်လွန်ခြင်း ၇ နှစ်ပြည့် ဆွမ်းကျွေးကို ဆရာသွားရောက်ခဲ့တာကို တွေ့ပါတယ်။ ဆရာဦးကြည်မောင်နဲ့ ဆရာတို့ အင်န်အယ်ဒီပါတီမှာ အတူတကွ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့...
Interview with U Win Tin – New Political Chapter of Suu & NLD?
> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အင်န်အယ်ဒီ နိုင်ငံရေးခြေလှမ်းသစ်များ ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ မိုးမခ၊ သြဂုတ် ၁၇၊ ၂၀၁၁ ယမန်နေ့က မြန်မာပြည်ရဲ့ အတိုက်အခံပါတီ အင်န်အယ်ဒီရဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဝင်းတင်နဲ့ တွေ့ဆုံစကားပြောခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ အဲသည်မှာ အများက...